Soundcore Liberty 3 Pro dia safidy vaovao miaraka amin'ny ANC sy famaritana avo | Gadget News
Miguel Hernandez | 05/11/2021 13:00 | Accessories, Gadgets, General, hevitra
feo fototra dia orinasa fanamafisam-peo izay nanangana ny tenany tao amin'ity sehatra mazoto ity tamin'ny alàlan'ny famokarana vokatra manana fenitra avo lenta, toy ny tranga hafa izay nodinihinay teto amin'ny Gadget News amin'ny fomba Cambridge Audio na Jabra. Noho izany dia midina amin'ny raharaham-barotra izahay izao miaraka amin'ny Soundcore.
Izahay dia mijery lalindalina ny Liberty 3 Pro vaovao avy amin'ny Soundcore, headphone TWS miaraka amin'ny feo ANC sy Hi-Res izay hahafaly ny mpampiasa. Fantaro miaraka aminay hoe ahoana no mampiavaka ny Soundcore Liberty 3 Pro ary raha tena manatanteraka ireo fampanantenana rehetra ireo izy ireo.
2 Ny toetra ara-teknika sy ny "Golden Sound"
3 Fanafoanana tabataba manokana sy fampiharana
4 Ny fahaleovan-tena sy ny antsipirian'ny vokatra "premium".
6 Tombontsoa sy lafy ratsy
Ireo Liberty 3 Pro dia manana endrika manavaka ary zavatra ankasitrahana amin'ny tsenan'ny headphone TWS izay misy ny sasany toa dika mitovy mivantana amin'ny hafa. Amin'ity tranga ity, ny Soundcore dia manolo-tena mafy amin'ny famolavolana manavaka na dia amin'ny tranga misy azy aza, toa ny "boaty pill" izay misokatra amin'ny alàlan'ny fisondrotana ambony ary toa tsara tarehy. Raha ny loko, dia afaka misafidy fotsy, maitso maitso, lilac sy mainty. Misy fingotra maromaro manodidina azy ireo izay mampifanaraka azy amin'ny sofina, mba tsy hianjera sy hisoroka tsara. Izany rehetra izany dia tsy hadinoina fa tena miatrika écouteur an-tsofina isika, izany hoe ampidirina ao anaty sofina.
Votoatin'ny fonosana: Earphone + écouteur silicone valo + refill ivelany 3 + cas de chargeur + cable de chargeur.
Ny refy sy ny lanja: 7,1 x 5,5 x 2,7 cm ary 45 grama
Raha tianao izy ireo dia azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon
Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ny famolavolana azy ireo, dia mamela ny fikorianan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny rafitra iray izay mampihena ny tsindry ao anaty sofina ary mahatonga ny fampiasana isan'andro ho mora kokoa. Manana teboka ergonomika fototra telo izahay, ny "fin" eo an-tampony, ny fingotra eo amin'ny farany ambany sy ny gripa izay mitranga amin'ny pad silicone. Design manakorontana ary mahazo aina tsara izy ireo.
Ny toetra ara-teknika sy ny "Golden Sound"
Ankehitriny dia mandeha amin'ny teknika madiodio isika. Izy ireo dia vokarina amin'ny fakan-tsary eo anoloana sy ny rafitra izay mamela ny hampihenana ny habeny sy hanatsara ny frequences ny feo. Izy io koa dia misy mpamily mifono vy ary farany mpamily dynamique 10,6 milimetatra. Izy io dia mampiasa teknolojia feo coaxial ACAA 2.0 miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika amin'ny alàlan'ny rafitra fanaingoana ao anatin'izany ny mikrofonina anatiny.
Ny codec audio tohanana dia LDAC, AAC ary SBC, Amin'ny ankapobeny dia hanana feo avo lenta isika na dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra aptX Qualcomm. Marihina ihany koa fa tena mahaleo tena tsy misy finday izy ireo, ho afaka hampiasa azy ireo tsy misy olana isika.
Manana izany fomba izany isika feo manokana amin'ny alàlan'ny rafitra HearID ary feo manodidina amin'ny lafiny telo. Araka ny fantatray fa mbola te-hanao fanatanjahan-tena miaraka amin'izy ireo ianao, dia tsy afaka manadino ny fanoherana ny rano voamarina ianao IPX4 izay hamaha ny ankamaroan'ny fampiasana izay azontsika antenaina. Tsy manana fampahalalana feno momba ny fitaovana anatiny izahay amin'ny resaka fifandraisana, fantatray fa Bluetooth 5 izany ary ny codec LDAC voalaza etsy ambony dia ahafahantsika miditra amin'ny feo Hi-Res, izany hoe miaraka amin'ny data avo telo heny noho ny format Bluetooth mahazatra. . Anker Soundcore ...
Fanafoanana tabataba manokana sy fampiharana
Ny mikrôfonina enina mitambatra miaraka amin'ny Artificial Intelligence dia mahatonga ny fanafoanana ny tabataba amin'ireo Liberty 3 Pro ireo ary afaka nankasitraka ny fitsapana nataonay izahay. Na eo aza izany rehetra izany dia afaka manararaotra safidy telo samihafa isika arakaraka ny tsirontsika sy ny filantsika. Inona no nantsoiny Ny HearID ANC dia mamaritra ny haavon'ny acoustic ny ivelany sy ny atiny amin'ny sofina, ka afaka manitsy ambaratonga telo fanafoanana ny tabataba manomboka amin'ny ambany indrindra ka hatramin'ny avo indrindra arakaraka ny karazana tabataba tsikaritra. Izany rehetra izany dia tsy manadino ny "mode mangarahara" angano izay tsy afaka nanandrana satria tsy nampidirina izany raha tsy amin'ny fanavaozana manaraka, ity rafitra ity dia antsoina hoe Enchance Vocal Mode.
Ho an'izany rehetra izany dia manana ny fampiharana ny feo fototra (Android / iPhone) miaraka amin'ny fiasa marobe sy interface tsara mpampiasa. Amin'ity fampiharana ity dia afaka manitsy ny fanehoan-kevitra amin'ny fikasihana ataontsika amin'ny écouteur isika mba hifaneraserana amin'ny fanaraha-maso mikasika azy ireo, ary koa hanova ny toe-javatra sy ny safidin'ny fifandraisana amin'ny fitaovana sisa. Ahoana raha tsy izany, manana rafitra fampitoviana isika izay ahafahantsika milalao mba hiafara amin'ny fisafidianana ny dikan-teny ankafizinay.
Ny fahaleovan-tena sy ny antsipirian'ny vokatra "premium".
Anker's Soundcore dia tsy nanome fampahalalana manokana momba ny fahafahan'ny bateria mAh an'ireo headphone ireo. Eny mampanantena antsika izy ireo 8 ora fampiasana amin'ny fiampangana tokana, izay nihena 10 ka hatramin'ny 15 isan-jato tamin'ny fitsapana nataonay niaraka tamin'ny fanafoanana ny tabataba. Manana totalin'ny Ora 32 raha ampidirintsika ny fiampangana ny raharaha, izay toy izany koa, dia manodidina ny 31 ora ny fitambarany.
Ity tranga ity dia ahafahantsika mamatsy ny écouteur ka ao anatin'ny 15 minitra monja dia atolony antsika adiny telo indray ny playback. Ankoatra izany, Ny famandrihana ny raharaha dia atao amin'ny alàlan'ny tariby USB-C, fa ahoana raha tsy izany dia manana isika famandrihana tsy misy tariby miaraka amin'ny fenitra Qi ao amin'ny ampahany ambany, ary koa ny LED telo eo anoloana izay mampahafantatra antsika ny sata mifehy ny fizakan-tena. Ireo angon-drakitra rehetra ireo dia manatsara kely ny atolotry ny Liberty Air 3 Pro sy ny Liberty 2 Pro. Amin'ny ambaratongan'ny fahaleovan-tena, ireo Liberty 3 Pro dia eo amin'ny haavon'ny tsara indrindra, na dia efa nanome fahatokiana tsara aza ny haben'izy ireo fa hanana toetra miavaka izy ireo. amin'ity fizarana ity.
Gaga izahay tamin'ireto Liberty 3 Pro ireto ny kalitaon'ny feony tsara sy amin'ny antsipiriany izay ahafahantsika mahita ireo karazana firindrana sy matetika. Ny fanafoanana ny tabataba dia miavaka, na mihetsiketsika na mavitrika, ary ny mikrofoniany tsara dia nanome valiny lehibe tamin'ny filàna antso na fihaonambe video. Ny fifandraisana Bluetooth dia miorina amin'ny lafiny rehetra. Mahavariana, eny, fanatsarana be loatra amin'ny bass ary tsy mamaly tsara matetika araka izay irinay ny fanaraha-maso mikasika. Ny vidiny dia manodidina ny 159,99 euros amin'ny Amazon ary ny tranonkala ofisialin'ny Anker.
Navoaka tamin'ny: Novambra 5 avy amin'ny 2021
Fanovana farany: Novambra 2 avy amin'ny 2021
Fampiharana feno sy fahaleovantena
Baso nohatsaraina be
Tsy mahomby ny fanaraha-maso mikasika indraindray
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Soundcore Liberty 3 Pro dia safidy vaovao miaraka amin'ny ANC sy famaritana avo
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, kilalao izy io ary avo lenta [Fandinihana]